Njalo inkampani ehloniphekayo noma inhlangano kumelwe ube kwansuku ikheli ukuphila ifolda yakho. Lezi nesembozo kahle eyenzelwe iphepha standard (A4) format yisibaluli ebalulekile i executive futhi okuzokwethulwa, izivumelwano, ukulethwa izinhlamvu noma timphawu, futhi nsuku zonke umsebenzi wasehhovisi. Hhayi bungavami zingabantu ezikhathini zamuva futhi ikakhulukazi njengoba ngendlela ngikweluleke ukuhalalisela othile ngeholide.
Kwezinye izimo, kukhona amafolda abahlosiwe
Ikheli amafolda amele ezweni lethu, izakhi yendabuko ezihlukahlukene nemicimbi ekhethekile efana isevisi, kanye ekhaya. Ngosizo lwabo, unga:
ukuhalalisela abasebenzi nge ikhalenda (March 8, 23 Februwari New Year) noma iholide ngokuyikho;
ukwethula abaqotho kakhulu izifiso iqhawe kosuku;
uhalalisele ku uzakwabo ukukhuthazwa
isandla ngikweluleke nanoma yimiphi imibhalo noma timphawu;
ukuwudlulisela imikhonzo kanye isipho kwabasanda kushada emshadweni.
Enhle yakhelwe, ezibizayo ezibukeka ikheli ifolda ezimweni ezinjalo, uyonika okwenzekayo futhi waba nokwethenjelwa, futhi isisindo oyifunayo, ikakhulukazi egcizelela solemnity futhi ukubaluleka okwamanje, okuyinto kuqinisekiswa eziningi nokubuyekeza amakhasimende.
Yiziphi ezinye izimo kukhona amafolda abahlosiwe
Kodwa hhayi izinhlangano yenkampani kuphela, imikhosi noma imigubho nemicimbi ehhovisi kungenziwa iphawulwe njengoba kuchazwe nekwetfula isipho. Ikheli amafolda abasakwazi ofanelekayo (futhi ngezinye izikhathi ngisho kudingekile) futhi ngesikhathi sokuthweswa iziqu amaqembu kwanoma iyiphi isikhundla - enkulisa, esikoleni noma isikhungo semfundo esezingeni eliphakeme.
Ukuze izenzakalo ezinjalo, bona, yebo, kusukela ngaphandle zenziwa kuye engu-ababethweswa iziqu, futhi ikheli ngaphakathi ifolda ayikwazi ishidi ifakwe nge ukubingelela, + njengasosukwini lokungivivinya Kwezinye izimo, kwenanyekwe iqembu isithombe noma ekilasini ukuze phakade kube yisikhumbuzo eminyakeni ezimangalisayo wachitha ndawonye. Ukwengeza isithombe siyakuhalalisela elikhanyayo, futhi ngezinye izikhathi ngisho ekhethekile ushiye ishidi engenalutho iphepha lapho phakathi imikhosi noma ngemva kungaba ukushiywa isignesha inkumbulo namazwi anomusa komunye nomunye. Uyavuma ukuthi le folda uyofuna ubukeza ngaphezu kwesikhathi esisodwa!
Kodwa lokhu zokubhala akuyona kuphela ngezikhathi zemikhosi. It is kabanzi kwezamabhizinisi futhi ehhovisi zokuphila kwansuku zonke - eqinisweni, noma iyiphi inkampani, ibhange noma ibhizinisi has a lot of izibambiso ezidinga esiphuthumayo isignesha kumqashi. Ukuze wenze lokhu, bese usebenzisa ifolda "Ukuze Isiginesha" noma "ne amazwibela," nayo okubhekiswe, kodwa kokuba kakade ibhizinisi format.
impahla Akubizi kumafolda okubhekiswe
Konke lokhu amafolda ngokuvamile enziwa oda, okuyinto ikuvumela ukuba wengeze kuya Umklamo ngasinye salezi zici ngabanye futhi kwenze kube eyingqayizivele kakhulu futhi eyingqayizivele. Futhi kufanele kuphawulwe ukuthi inguqulo iholide yalezi amafolda, kumelwe unake okukhethekile.
Ezimweni eziningi, ikheli A4 amafolda ngibopha zenziwa high paperboard (Uhlonze lwalo ngokuvamile zokhahlamba kusuka 1.5 kuya 2.5 mm) kanye camera mbumbulu lesikhumba noma okuqotho, phezu okuyilokho, eqinisweni, lenziwa embossed.
Ukuze yokufakelwa ikhava bumvinil esetshenziswa njengoba izinto basekhaya nabamazwe angaphandle (baladek, balakron, mundior tango et al.). Amanani kubo ziphansi, ngakho lezi nesembozo ngokuvamile ingenzele ekhiqizwa serially ifolda ezishibhile. Nokho, ngezinye izikhathi basuke asetshenziswe ekukhiqizeni oda ekhethekile, uma udinga semali zokubhala kuchazwe, isibonelo, ngenxa siyakuhalalisela lonke iqembu.
impahla Okuningi ezibizayo kumafolda
Ukuze ngezikhathi ezikhethekile - ukuhlonipha iqhawe ihlonishwe kosuku, umlingani noma kumqashi - ukuze, njengoba umthetho, lo ezibizayo ikheli ifolda. Bumvinil kuleli cala kakade sithathelwe indawo lesikhumba ezase, okuyinto omele kakhudlwana futhi, yibo bonke akhawunti, izinto eziqinile-ngifuna ngaphezulu.
Futhi intando eqolo futhi ziyabukeka, yebo, ifolda wenziwe okuqotho. Umbala yayo ngeke nje kube omnyama noma ompofu. Lezi amafolda sihle e blue, burgundy noma yimuphi omunye design - konke kuncike ikhasimende nemibono yakhe mayelana nobuhle. Ngaphezu kwalokho, ukugcizelela ukubaluleka isipho, amakhona uhlu wathi zivame ezenziwe ngethusi noma metal-chrome kuhlinzwa ukuthi hhayi kuphela kwenza kube ubukeka kahle ngokwengeziwe, kodwa futhi zivikela umonakalo ngangokunokwenzeka.
izici zayo okubhekiswe amafolda
Kungakhathaliseki phambi kwethu noma isikhumba ikheli bumvinilovye amafolda, babehlale kuhluke ngokuphawulekayo kusukela nezinye ihhovisi usinikeza injongo efana design yabo Ingaphandle.
Njengoba iningi lawo achaza iholidi ke ukuklama ngamunye kufanele - egqamile te ikhava umbala (igolide, burgundy, obomvu, omhlophe, njll), Futhi, abe umphelelisi, nginyathela, eyenziwe noma isiliva ucwecwe, ephinde ikunike umkhiqizo onesizotha ikakhulukazi njengoba kusho enye incwadi.
Ikheli ubukhulu ifolda ngokuvamile kunqunywa ifomethi ejwayelekile A4 iphepha (njengoba lesi kuyisikhathi nenkundla shidi kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-siyakuhalalisela noma izitifiketi zokubhalisa kanye amadiploma), kodwa kwezinye izimo ngomyalo ekhethekile eyenziwe abanye osayizi ifolda.
Yiziphi imibhalo senziwa kumafolda okubhekiswe
Embossing noma umbhalo isembozo lomkhiqizo ezichazwe ziyahlukahluka kuye lizosetshenziswa kanjani. Lokhu kungenziwa okubhekiswe ifolda: "Bayajabula Usuku olugujwa minyaka yonke", "Halala", "Halala", "Ngosuku lomshado," "Usale kahle, esikoleni", Njll Kulabo asetshenziswa ehhovisi, isixazululo esingcono kakhulu yangaphandle .. angeke abhaliswe embossed ijazi izingalo, logo noma igama lenhlangano.
Ukuze kube lula ukubekwa ngaphakathi ikhava ifolda dokhumenti okwengeziwe unikezwe emakhoneni ekhethekile, emaphaketheni kanye transverse nokunwebeka band noma tape kunanyathelwe ishidi ifakwe kulo.
Njengoba ifolda senziwa ngaphakathi
Umklamo yangaphakathi, okuyinto izici ifolda ikheli elahlukile, kuncike injongo nokubaluleka. Eshibhile izindleko izinto ngokuvamile vykleivayutsya ngaphakathi ezimhlophe offset iphepha (ukuminyana ayo kufanele abe hhayi ngaphansi kuka 100 g / m²), futhi ukusebenzisa amafolda ezibizayo, Lint. Lokhu kungaba afalin usilika, velvet umhlambi kanye nezinye izinto okwazi ukucindezeleka nokuqina isipho.
Ngesikhathi amafolda efanayo abaneziqu e design ingaphakathi ngokuvamile zisebenzisa amalogo ezahlukene kanye imiklamo ukuthi kungaba ngemuva kuhle izithombe kanye siyakuhalalisela.
Izici ifolda ehhovisi "ukuze ungene" futhi "Ngo nesiginesha"
Indawo ekhethekile phakathi supply ehhovisi yiliphi ihhovisi oluthatha ikheli ifolda "on the isignesha." Angakwazi ukutshela okuningi mayelana sina nokuqina ibhizinisi. Uma isivakashi ubona lesikhumba ifolda ezibizayo, ukuthi kuyoba kuye ubufakazi ukuthi inkampani ihlose ube yimpumelelo futhi kakade has ngempela indawo okuqinile endaweni yabo.
Kulezi amafolda, njengoba umthetho, musa ukwenza imigexo. On ikhava ishiywa umbhalo oqoshwe: "Ukuze nesiginesha", "ngemvume ku" noma "ne amazwibela," futhi ngezinye izikhathi - igama lenkampani noma umphathi walo. Kufolda eside ibe ukubukeka sibukeka kahle kwenza metal emakhoneni. Ngaphakathi kumafolda zivame ifakwe valve akhethekile ezisiza ukuqinisa amashidi, kanye emaphaketheni for CD ngisho linezingxenye for izibaya.
Tales izingane ezingaphansi konyaka owodwa - isihluthulelo enganeni
Njengoba i-intanethi ukuze uthole $ 100: Izindlela
Kanjani ukushaya nokwesaba ukufa? Yini kubizwa ngokuthini?
Ukudala ungubani lenkampani: inqubo kanye nezici